Anodiwa Twitter, Ndokumbirawo Mira Anotevera Kupenga | Martech Zone
Anodiwa Twitter, Ndokumbirawo Mira Anotevera Kupenga
China, May 7, 2009 Svondo, Nyamavhuvhu 23, 2009 Douglas Karr
Zuva rega rega ini ndinoteerera kune yangu inotevera pane Twitter. Nhengo yega yega uye yega inonditevera yaireva chimwe chinhu. Ndakavaka zvinotevera zvangu, nekuwana kudiwa nemumwe muteveri panguva.
Kwete futi. Zvino hazvina musoro… otomatiki-tevera mafungu vari kuurayiwa miniti neminiti. Ini ndinogona kuenda paTwitter nhasi ndotsvaga mazana mashoma ekutsotsi ayo anokumudzira iwe pamusoro pevateveri zviuru gumi mune nyaya yemazuva. Twitter inofanira kunge ichinetseka pasi pehuremu hunoshamisa hweaya manhamba.
Ini handizive chinogombedzera mumwe munhu kubiridzira manhamba kuti awane maziso eziso asina chinhu. Ndeupi mhando yehunhu iwe yaunofanirwa kuva nayo kuti uburuke munzira iyoyo? Handina chokwadi asi zvinonditsamwisa chaizvo. Vateveri vangu zviuru zvishanu vaimboreva chinhu. Iye zvino ndapfuura zviuru zvitanhatu… asi vazhinji vateveri vatsva vano tevera-mhoni.
Aya auto-anoteedzera masisitimu anofanirwa kunge achishanda kunze kuTwitter, saka zvinofanirwa kuve nyore kuaziva uye kuvharira Twitter inofanira kuzviita izvozvi - kwete kungozvibvisa ponyowani inoteedzera kuverenga, asi kurerutsa kushushikana kuri kuita vateveri vese ava kukanganisa mashandiro eTwitter kune isu tese vanoonga basa ravo.
Ndokumbirawo Twitter… ita chimwe chinhu nezvazvo! Vari kukuvadza chishandiso chako.
Chii Chinoita Kuti Muongorori Mukuru?
10 Bhizinesi Twitter Mapurogiramu eiyo Bhizinesi
May 8, 2009 pa 12: 29 AM
Ini ndinoshandisa kutevera auto pandakatanga uye ndikazoona mhando dzevanhu vandaibvumidza vaive vasiri vandaida kutevera. Iye zvino ndinosarudza uye ndosarudza rimwe nerimwe. Ndiri kukutevera ikozvino sekutarisa uye ndanga ndisati ndatove.
May 8, 2009 pa 12: 32 AM
Ini chaiko ndaisa chikumbiro kuTwitter kuti ndibvise yangu auto-yekutevera marongero asi handisati ndanzwa zvakare ... ndinofunga ivo vakanaka kubatikana izvozvi! Ndinovimba vanowedzera imwe sarudzo kuti ndikwanise kungodzima ndega. Iye zvino ndiri kuzvidemba Michael!
Ndiri kutarisa yega yega uye ndisingateedzere pandinoona ivo vachingoita spammer kana auto-inotevera phony (ivo vanokwira kubva kune vateveri vashoma kuenda kuzviuru muvhiki).
May 8, 2009 pa 8: 36 AM
twitter iri mukutonga kwenyika izvozvi. munhu wese muhofisi mangu ari kungo tenderera kutenderera nguva dzese. ini handina kumisikidza auto-inotevera
May 8, 2009 pa 9: 07 AM
Zvinosekesa sei kuti shambadziro yemabhena pamusoro pechinhu ichi ndeye sevhisi inokutorera vateveri mazana mana emadhora 4,000.
May 8, 2009 pa 5: 35 PM
Ndiwo manzwi aDoug anopopota iwe aunonzwa! Doh!
May 8, 2009 pa 10: 27 AM
Zvinotaridzika pese pandinowedzera chinyorwa pa twitter ini ndinopedzisira ndave nevateveri vashanu vatsva?
May 8, 2009 pa 10: 38 AM
Ini ndiri mutsva ku twitter asi ndiri kuona dambudziko uye mhirizhonga izvi zvichakonzera. Batsira kuwana rutsigiro rwemushandirapamwe wangu wekuita kuti vanhu vaone mwenje vorega kushandisa auto vanoteera marobhoti, zvinyorwa uye masevhisi.
May 8, 2009 pa 5: 38 PM
May 8, 2009 pa 4: 03 PM
Hupenyu hupfupi kuti husanganisike nevanhu vasingafarire zvakafanana nezvamunoita ... ndinonzwa kuti vanofambidzana vanofanira kunge vakaita se "Rakanaka" bhodhoro reWine iwe raunofanira kusarudza uye kusarudza kuti ndezvipi zvakanakira kuravira kwako!
May 9, 2009 pa 1: 31 AM
OMG. Ndatenda nekunyora izvi. Ndine rudo / ruvengo hukama ne Twitter nekuda kweichi chikonzero. Nezuro chaiye, ndakaremara ziviso nekuti ini ndaingotambisa nguva yakawandisa kugadzirisa vatsva (vasina chinhu) zuva nezuva zuva nezuva (uye ini handina kana padhuze nenhamba yepamusoro yevateveri sevamwe).
May 21, 2009 pa 10: 35 PM
Ini ndanga ndichifunga kuti uku kwaive kuchinja kwako. Ndinoyeuka iwe uchiti iwe wakatevera-wega chero munhu aikutevera uye kuti iwe waifarira mune yega uye yega yega yevateveri vako. Ndiri kufunga kuti chii chakakonzera shanduko yakazara mumaonero ako pane iri zano? Yakanga iri chete spammers?
Apr 6, 2011 pa 1: 09 AM
Ini ndinobvuma, ini ndinofunga otomatiki anotevera maturusi haagadzi chero chaiyo kukosha kwevateveri uye vateveri. Zvinosuruvarisa kuona iyi positi ingangoita makore maviri ekuberekwa.